बढ्याे सुनकाे मूल्य, चाँदीकाे कति ? – हाम्रो देश
बढ्याे सुनकाे मूल्य, चाँदीकाे कति ?
नेपाली बजारमा आज (बिहीबार) नेपाली बजारमा सुनकाे मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएकाे छ । प्रति ताेलामा २०० रुपैयाँले बढी ९४ हजार ५०० रुपैयाँमा काराेबार भइरहेकाे नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएकाे छ । बुधबार ९४ हजार ३०० रुपैयाँमा काराेबार भएकाे थियाे ।
तेजाबी सुन प्रतितोला ९४ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । सुनकाे मूल्य बढ्दा चाँदीकाे भने स्थिर रहेकाे छ । बिहीबार चाँदी प्रति ताेला एक हजार २८० रुपैयाँमा काराेबार भइरहेकाे महासंघले जनाएकाे छ ।